Prisma Portable Ultrasound Detector - Famolavolana
Portable Ultrasound Detector
Portable Ultrasound Detector Ny Prisma dia natao ho an'ny fitsapana fitaovana tsy manintona amin'ny tontolo faran'izay henjana. Izy io no mpitsikilo voalohany nanambana imaging tena mivoatra sy fanodinana 3D, mahatonga ny fandikana famafazana mora kokoa, mampihena ny fotoana teknisiana amin'ny tranokala. Miaraka amin'ny fefy tsy azo ihodivirana ary fomba fiasa marobe tsy manam-paharoa, Prisma dia afaka mandrakotra ny fangatahana fitiliana rehetra, manomboka amin'ny fantsom-pamokarana solika hatramin'ny singa aerospace. Izy io no mpitsikilo voalohany miaraka amina firaketana angon-drakitra, ary andiany tatitra an-tsoratra mandeha ho azy. Ny fifandraisana an-tariby sy Ethernet dia mamela ny unit hanatsarana na hanombohana ny aretina.
Anaran'ny tetikasa : Prisma, Anaran'ny mpamorona : LA Design , Anaran'ny mpanjifa : Sonatest.
Fitaovana siantifika sy famolavolana fitaovam-pikarohana
Portable Ultrasound Detector LA Design Prisma